कोमल विवाह बनाउन-अप - चरण वर्णन, सल्लाह र रोचक विचार गरेर चरण
हरेक केटी गरेको सपना - रसीला विवाह। यो honeymooners लागि, तर पनि आफ्नो साथीहरु र आफन्त मात्र होइन एक विशेष दिन हो। एक विवाह यो समय र प्रयास को एक धेरै लिन्छ, विशेष प्रशिक्षण आवश्यक छ। दुलही लागि मुख्य कुरा हो - उनको छवि, यो सामान्य भन्दा राम्रो हुनुपर्छ यसको सौन्दर्य भविष्यमा पति र उत्सव अतिथि थिच्नुहोस्। पोशाक, जूता, पर्दा, नाजुक विवाह मेकअप। हामी विशेष दिनको लागि बनाउन-अप लागि विकल्पहरू विचार गर्न प्रस्तावित आज, यो आफैलाई गर्न सिक्न।
सुविधाहरू दुलही को छवि
विवाह फोटोग्राफर सबै को तस्वीर मा दुलही पहिचान गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, तर प्राकृतिक रूपमा उनको उपस्थिति बनाउन। कोमल विवाह फोटो मा बनाउन-अप यो केटी प्रकृति द्वारा यति सुन्दर छ कि जस्तो देखिन्छ, लगभग अदृश्य छ। क्यामेरा लिएको र विवाह को लागि त उज्ज्वल छन् कस्मेटिक्स को पनि अधिक रंग डुबा गर्न सक्षम छ। यो मुख्य रूप हो खैरो काजल परेलाहरु, चाँदी वा कफी छाया, लगभग पारदर्शी होंठ लागि। दैनिक कोमल दुल्हन मेकअप देखि सबै-दिन छवि अझै ताजा थप स्थायित्व र घनत्व, सुविधा हुनुपर्छ।
विवाह को nuances बनाउन-अप
मेकअप रंग छान्ने अघि सबै nuances आधारित हुनुपर्छ। मेकअप लागि सही रंग कसरी चयन गर्ने?
कोमल दुल्हन मेकअप imperceptible हुनुपर्छ। यसको tsvetotipa बाट सधैं सुरु गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, tanned श्यामला के अनुरूप हुनेछ विपरित मा एक निष्पक्ष चमड़ी गोरा स्थानको बाहिर हेर्न, र।
यो उत्सव को समग्र तस्वीर विचार गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। दुलही सेतो छैन, र गुलाबी, वा रातो, वा नीलो पोशाक हो भने, र अनुहार फिक्का देखिन्थे गर्न मेकअप थप हडताली हुनुपर्छ। विवाह पोशाक बिना रजिस्ट्री कार्यालयमा पारंपरिक चित्रकला छवि अलि कडा बनाउन सक्छ। को योजना विवाह, को lightest टोन चयन भने, दुलही को उपस्थिति, उज्ज्वल सफा, Untouched हुनुपर्छ।
यसलाई थप लोकप्रिय युरोपेली शैली विवाह बन्दैछ। उहाँले परिमार्जन र घटना नै, र दुलही। त्यसैले, सबै भन्दा, सरल superfluous आभूषण बिना अझै सुरुचिपूर्ण विवाह पोशाक, केश चुनिएको एक छवि बनाउन र दुलही तिनीहरूलाई सिर्जना गर्न घन्टा खर्च भने छैन रूपमा गरेको-अप गर्न। कसरी युरोपेली शैली पालन गर्न?
विवाह लागि कोमल आँखा मेकअप राम्रो सेडिङ संग प्रदर्शन गर्न। त्यहाँ जो गाढा टोन छन् कुनै तेज लाइनहरु, हुनुपर्छ - यो मूलतः खैरो-आँखाहरू सुंदरियों को विकल्प, आँखा enveloping मात्र कोमल तुवाँलो छ।
दुलही लिपस्टिक को उपयुक्त उज्ज्वल रंग को युरोपेली छवि लागि, तपाईं पनि रातो, लाग्न सक्छ यो नाजुक दुल्हन मेकअप बिगार्छ छैन। विशेष रंग को आवेदन मा। को ओठको आकृति छैन अप, लिपस्टिक सजिलै लागू गरिन्छ, त्यसपछि रोगन औँलामा संग छाला एक सानो बिट चलाउनु आवश्यक छ समेट्न गर्नुपर्छ, तपाईं एक अधिक प्राकृतिक रंग प्राप्त। चुम्बन लागि जाँदा, विवाह अक्सर कि, लिपस्टिक बन्द लगाउने, तर यो वस्तुतः अदृश्य गर्नेछ, त्यसैले अक्सर Tinted गर्न छैन।
यो छाला सफा र उज्ज्वल बनाउन विशेष महत्त्वपूर्ण छ। शरमाना मात्र जोड आफ्नो रंग लुकाउन सक्नुहुन्छ नगर्ने pimples को र अरूलाई राता को अनुहार मा छ भने मात्र अनुज्ञेय छन्।
परेलाहरु र rhinestones को विस्तार को रूप मा वैविध्यपूर्ण सजावट यो इन्कार गर्न राम्रो छ, सान्दर्भिक अब छ।
अब हामी कदम नाजुक विवाह बनाउन-अप चरण सिर्जना विचार गर्न प्रस्तावित। विवाह लागि दुलही र तपाईं आफ्नो आफ्नै, मुख्य कुरा गर्न सक्छन् - कसरी यो सही गर्न जान्न।
दुल्हन लागि मेकअप लागि निर्देशन
आफ्नै विवाह अचम्मको मा हेर्न, तपाईँले कति सुन्दर र सही चित्रित गर्न सिक्नुपर्छ। सिफारिस कदम आफ्नो हात कमाउन लागि, उत्सव पहिले केही दिन, तल निर्धारित कस्मेटिक्स को आवेदन प्रयास।
तपाईं, उच्च गुणस्तरीय कस्मेटिक्स प्रयोग गर्नुपर्छ क्रीम पानी प्रतिरोधी र सुक्खा उपकरण हुनुपर्छ - उच्च pigmented विशेषताहरु छन्। एउटै हातमा लागि, तिनीहरूले पूर्ण राम्रो टाइप सामान यसलाई र राम्रो छाया दिनुपर्छ जान्छ। निम्नानुसार त्यसैले, घर मीठो विवाह बनाउन-अप बाहिर छ:
तपाईं बख्शते peeling को प्रयोग बिना छाला सफा गर्नुपर्छ। तेल छाला प्रकार संग बालिका, कस्मेटिक तह अपेक्षाकृत बाक्लो छ यो चम्कने लुकाउन हुनेछ चिन्ता छैन।
को क्रीम लागू, यो अवशोषित सम्म प्रतीक्षा, कम्तिमा पन्ध्र मिनेट, एक कागज तौलिया को remnants हटाउन।
आधार को पातलो पत्र लागू, यो एक मेकअप स्थायित्व दिन हुनेछ।
आधार प्रसार जग को आवेदन पछि पाँच मिनेट, आफ्नो स्वर suiting। आफ्नो कान उपचार गर्न निश्चित हुनुहोस्, तथ्य तिनीहरूले फोटोमा रातो कुरूप हेर्नेछौं गर्न सक्ने छ।
कंसीलर आँखा वरिपरि अँध्यारो सर्कल लुकाउन राम्रो मिश्रण।
को ब्रश पारदर्शी पाउडर मा ले, छाला उनको हिंड्न, त्यसैले तपाईं मेकअप थप टिकाउ बनाउन, चम्कने गुमाए।
आवश्यक भएमा, उत्कृष्ट रंग टोन सिर्जना गर्न हल्का खैरो छाया को अनुहार को ड्राई पाउडर फारम समायोजन गर्नुहोस्।
माथिल्लो पटल मा shone विवाह मेकअप निविदा गर्न, ब्रो लाइन पुगिरहेका सेतो pearlescent छाया लागू हुन्छ।
गाढा खैरो पेन्सिल, खैरो-आँखाहरू, तपाईं कालो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ परेलाहरु को वृद्धि को एक बाटो मा एक तंग लाइन खर्च। तीर सर्किट मिश्रण सिर्जना गर्नुहोस्, यो एक बैरल मा ब्रश गर्न मद्दत गर्नेछ।
छाया छाया कक्षीय हड्डी गर्न nakraste माथिल्लो पटल "दूध संग कफी", सीमा रूपमा inconspicuous हुनुपर्छ।
गाढा देखि गाढा रंग को एक चिकनी प्रवाह प्राप्त गर्न ताकि एक सताब्दी को एक चल्ने भाग गाढा छाया व्यवहार गर्छन्।
ओठ अलिकति nakraste गुलाबी वा रातो लिपस्टिक, एक pearlescent प्रभाव थप्नुहोस्। तपाईं लिपस्टिक बिना गर्न सक्छन्, तर चमक, pigmented गर्न तंग छ।
यो पुस्तिका प्रयोग गरेर, तपाईँले यसलाई स्टाइलिस्ट एक यात्रा पछि भन्दा कुनै खराब हुनेछ, आफ्नै विवाह मेकअप सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछ। बनाउन-अप लग विभिन्न प्रकारका लागि विकल्पहरू विचार गर्नुहोस्।
के 2017 मा महत्त्वपूर्ण छ?
दुलही गरेको मेकअप नरम थियो। तपाईं फैटी र देखिने रेखा, हल्कासित लागू कस्मेटिक्स हुँदैन। यस्तो बैजनी र निलो, यो पतला गर्न आवश्यक छ, त्यसैले तिनीहरूले आँखा पकड छैन रूपमा रंग को उज्ज्वल रंग, लगभग weightless हुन्छन्। हामी एक्लै उपस्थिति प्रत्येक प्रकार लागि नवीनतम रुझान विचार गर्न सुझाव। यो कपाल र आँखा को रंग मा आधारित हुनेछ।
हरियो-आँखाहरू दुलही लागि
यो सबैभन्दा दुर्लभ र रहस्यमय आँखा रंग छ, र यो हाइलाइट emphasizing लायक छ। यो एक राम्रो mezhresnichny सर्किट सिर्जना, यो एक गाढा खैरो वा आलुबखडा रंग पेन्सिल लाग्न सक्छ। ध्यान दिएर कवर अप आँखा कंसीलर अन्तर्गत सर्कल, टोन चिल्लो हुन, त्यसैले क्रीम र पारदर्शी पाउडर प्रयोग गर्नुपर्छ। छाया पूर्ण हरियो आँखा जोड - बैंगनी, बकाइन र आलुबखडा। तिनीहरूलाई मोबाइल पटल मा राखे, मोती सफेद वा चाँदी रंग मिश्रण।
नीलो आँखा लागि कोमल विवाह मेकअप
अविश्वसनीय सुन्दर नीलो र नीलो आँखा सुन्तला सबै भेरिएसनहरूमा रेखांकन, तर यो पनि उज्ज्वल छ एक विवाह को लागि एक कोमल बनाउन-अप सिर्जना गर्न। कोमल आरु वा सामन छाया मा विकल्प रोक्नुहोस्। छाला सेतो, सुन्दर उपस्थिति शुद्ध छ भने, तपाईंले एक बैजनी वा नीलो रंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो रंग एक सानो उच्चारण प्राप्त गर्न, साथै, बोसो छैन तह लागू छन् सम्झना हुनुपर्छ।
एक विवाह को लागि खैरो आँखा लागि मेकअप
धेरै यस्तो छेपारो आँखा भनिन्छ छन्। तथ्यलाई फ्रेम आधारमा तिनीहरूले रंग परिवर्तन र नीलो वा greenish बन्न, छ। तपाईं Emerald हरियो वा नीलो रङ्ग को एक प्यालेट प्रयोग तिनीहरू विवाह दिन हुनेछ के चयन गर्न सक्नुहुन्छ। खैरो आँखा र स्वीकार्य दायरा, नीलो र हरियो आँखा लागि उपयुक्त लागि। तपाईं पनि चकलेट को क्लासिक रंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
कालो वा खैरो आँखा
खैरो आँखा लागि कोमल विवाह मेकअप एक गाढा खैरो लागू गरेर बनाएको छ। छाला smuglyanok लागि उज्ज्वल छ भने तिनीहरू अस्वीकार्य छन् तपाईं, नीलो छाया प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
खैरो-आँखाहरू बालिका पर्ल कञ्चनपानी छाला बन्द सेट गर्न, थप गर्नुपर्छ। परेलाहरु धेरै रसीला हुनुपर्दछ, र आफ्नो गाढा-खैरो मसी, "बीम" माथि गर्न भने अझ कोमल नजर हुनेछ।
सलोनियां दुल्हन लागि मेकअप
गोरा बालिका विवाह हुन हुँदैन, पीला, तर भारी रेखाहरू राख्नु छैन। सलोनियां मेकअप लागि अधिकतम रंग - आरु छ, चिया गुलाब रंग, सुन। छाला shone कि, टोन हाइलाइटर थप्न, सिर्जना शरमाना। Nakraste ओठ shimmer वा हल्का pigmented चमक संग गुलाबी पीला।
Brunettes लागि कोमल विवाह मेकअप
बेज र गुलाबी hues बचा गर्नुपर्छ। लाभदायक गहिरो चकलेट रंग, सुनको विशेषताहरू संग पूरा हेर्न हुनेछ। स्पंज रातो, आलुबखडा वा गाढा लिपस्टिक रंग हुन सक्छ।
तीर आँखा लागि मास्क कसरी बनाउने?
"Divazh" (कस्मेटिक्स) - एक सुन्दर महिला को लागि एक स्वर्ग
टोन क्रीम "Iv Roshe" "शून्य कमी": ग्राहक समीक्षा
राम्रो तर कसरी चयन गर्न: सल्लाह beauticians
सबै भन्दा राम्रो eyeliners: र्याङ्किङ्ग
टोन क्रीम अधिकतम कारक चिरस्थायी प्रदर्शन। तपाईंको छाला सिद्ध छ
Dzheyson Myuz: जीवनी, Filmography र अभिनेता बारेमा रोचक तथ्य
Flising बाल - मात्रा लागि कट्टरपंथी रसायन
Polycarbonate डाली: गुण र आवेदन
प्रशासन को फारम रूपमा सम्पत्ति-प्रतिनिधि राजतन्त्र
पाइप को Trenchless बिछाउने: विधि विवरण
Boho शैली - नि: शुल्क र ऊर्जावान लागि फैशन! आफ्नो हातले कुराहरू के सिक्न, Boho: हार, स्कर्ट, बाल आभूषण
अर्थ व्याख्या संयुक्त: Runa "Raido"
केटाहरू र बालिका लागि ढाँचा छोराछोरीको पायजामा: योजना र सिफारिसहरू विवरण
बक्से मास्टर शिल्प
शब्द "अर्थ" अल्पविराम वा छैन जारी छ? "त्यसैले": एक अल्पविराम आवश्यक छ?
लिभर बाट चपप्स - चाँडोमा स्वादिष्ट पकवान
Oliver Kahn: एक फुटबल खेलाडी को जीवनी र व्यक्तिगत जीवन (फोटो)